Hiran State - News: HS:-Hiiraan oo maamul yeelaneysa.
HS:-Hiiraan oo maamul yeelaneysa.
HS:- Kadib shirar is daba joog ah oo ay magaalada Belet Weyne ka wadeen masuuliyiinta dowlada ugu jirta reer Hiiraan kuwaasi oo iskugu jira wasiiro, xildhibaano ayna kaabayaan waxgaradka Hiiraan ee ku sugan madasha uu shirku ka socdo ayaa ugu danbeyn waxaa lagu wada in ay Hiiraan yeelan doonto maamul kumeel gaar ah.
Maamulkan oo noqon doona mid shaqeeya mudo cayiman ayaa inta badan leysla gartay qaabka uu u shaqeyn doono iyo mudada uu jiri doono iyadoona dhawaantan uu maamulkaas hogaamin doono mid ka mid ah dhawr qofood oo hada miiska saaran.
Reer Hiiraan oo iyagu ka hor yimid in Mogdisho looga soo magacaabo shaqsi taasi bedelkeeda waxey ka door bideen in ay gudaha Hiiraan iskugu tagaan iyadoo la tixgalinyao waxgaradka ku sugan gudaha, waxeyna u muuqataa in Hiiraan uu yeelan doono maamul kumeel gaar ah oo soo diyaariya shirweyne kadibna shacabku ay iyaga soo dooran doonaan maamulka bedeli doona midka hada lagu dhawaaqi doono.
Shirarkii ugu danbeyey iyo arimaha maamul u sameynta bulshada Hiiraan ayaa meel fiican maraya iyadoona ay reer Hiiraan siweyn u soo dhaweyn doonaan maamulkan si loogu gudbo mid rasmi ah oo reer Hiiraan gaarsiiya heerka ugu sareeya dhinaca horumarka.
Hadaba qaab dhismeedka maamulka iyo cida hogaamineyso hada kama hor dhaceyno laakinse inta badan aragtida ah in Hiiraan maamul kumeel gaar ah loo sameeyo waa leysla gartay waxaa haray oo kaliya farsaamadii iyo maalintii sida rasmiga ah loogu dhawaaqi lahaa.inta badan kooxaha ku sugan gudaha magaalada Belet Weyne ayaa ka dheregsan maamulka loo sameynayo Hiiraan qaarkoodna si hoose ayeyba masuuliyiinta dowlada iyo waxgaradka ula soo xariireen iyagoo leh waanu soo dhaweyneynaa waxkasta oo Hiiraan looga dhawaaqo marba hadii taladii lagula soo laabtay reer Hiiraan.
Maamulka la doonayo in maalmaha inagu soo aadan looga dhawaaqo gudaha Hiiraan ayaa noqonay maamul xiriir wanaagsan la leh dowlada kumeel gaarka ah si ay meesha uga baxdo mugdigii reer Hiiraan iyo dowlada ka dhaxeeyey, si dalka loo bad baadiyo waxuu noqon doona maamul uu aad u yaraan doono mucaaradka uu kala kulmi doono bulshada Hiiraan.
Shacabka Hiiraan oo ah kuwo wanaag doon ah ayna horey u jahwareeriyeen shaqsiyaad damacooda uu waali yahay qaab qaldana wax ku raadiya waxaa u soo socda maamul la rajeynayo in uu bulshada Hiiraan u horseedo horumar iyadoona la ixtiraami doono maamulkasta oo ay isku raacaan siyaasiyiinta Hiiraan ku sugan maadaama ay bulshada u dhega nuglaadeen taladiina keeneen in lagu korfeeto caasimada Hiiraan ee Belet Weyne.
La soco wararkeena danbe iyo shaqsiga loo maleynayo inuuu reer Hiiraan hogaamin doono.
· admin on January 25 2012 09:51:37 · 0 Comments · 1771 Reads ·
14,568,815 unique visits